Ogaden News Agency (ONA) – AMISOM oo Iska Fogaysay Xadhiga Mukhtaar Roobow.
AMISOM oo Iska Fogaysay Xadhiga Mukhtaar Roobow.
Posted by Dayr	/ December 16, 2018
Danjire Francisco Madiera wakiilka Midowga Afrika (AU) u qaabilsan Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay rabshadaha maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada baydhabo iyo eeddii ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka usoo jeediyeen AMISOM.
Ugu horeyn Francisco Madiera ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin xaalada dagenaansho la’aan ee ka jirta maalmahan magaalada Baydhabo isla markaana si dhow uu ula socday dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Koofur Galbeed. Madiera ayaa sheegay in ka AU ahaan in ay uga tiiraanyeysan yihiin dadkii ku dhintay rabshadaha, isaga oo tacsi u diray dhammaan qoysaskii ay ka baxeen.
Francisco Madiera ayaa sheegay in AMISOM aysan wax lug ah ku lahayn dhacdadii dhawaan lagu soo qabtay Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) kaas oo ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia ay gacanta ku dhigeen una gudbiyeen dowlada Federaalka Soomaaliya.
Hadalka wakiilka gaarka ah ee AU u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madiera ayaa kusoo beegmaya xili maalintii shalay ahayd xildhibaano la baxay Golaha Badbaado Qaran ay AMISOM ku eedeeyeen in ay ku lug yeelatay arimaha siyaasada dalka.